फागुन ०६, २०७५ PS
काठमाडौँ : आफ्नै नौं वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एक पूर्व हवल्दार पक्राउ परेका छन्।
गत शुक्रबार श्रीमती माइती गएको दिनमा छोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको खुलासा भएपछि उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–४ बडीखेल बस्ने उनी राती करिब ८ बजे मदिराले मात्तिएर घर पुगेको र छोरीमाथि करणी गरेको खुल्न आएपछि पक्राउ गरि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरबाट सात दिनको म्याद थपिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रमुख गौतम मिश्रले जानकारी दिए।
बालिकाले पेट दुखेको बताएपछि आइतबार नजिकैको हेल्थसेन्टरमा लगेर चेकजाँच गर्ने क्रममा यौनाङ्गगमा चोट भेटिएपछि घटनाबारे खुलासा भएको उनले बताए। त्यसपछि प्रहरीमा दिईएको उजूरीका आधारमा बाबुलाई पक्राउ गरिएको हो।
बालिकाले घटनाबारे बताए लगत्तै आइतबार पक्राउ परेका बाबुलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले अभियुक्तको नाम गोप्य राखेर घटनाबारे छानविन अगाडी बढाएको हो।
प्रकाशित : सोमबार, फागुन ०६, २०७५१७:५४
भारत भ्रमण सकाएर नेपाल फर्किए महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल !
[LIVE]सन्दीपको टिम सिलहेट सिक्सर्सले शुरुमा बलिङ गर्दै ! यहाँ हेर्नुहोस् लाइभ ![LIVE]
ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको दाउ : उपाध्यक्ष लाल
अझ थप तीन लाख अश्लील एवं यौनसम्बन्धित वेभसाइट बन्द गरिने !
ललाई फकाई जबरर्जस्ती यौन सम्पर्क गरेपछि जंगलमा लागेर ज्यान मर्न खोज्ने झा पक्राउ
कर्णालीमा डुंगा दुर्घटना , एकको मृत्यु अन्य सकुशल !